Ama-Retrievers ase-Australia: Asheshayo futhi Agcwele Ubumnandi - Izinhlobo
Cabanga ngamaqhawe akho amabili owathandayo. Manje ake ucabange ukuthi bahlanganisa amandla abo ukudala ifayili le- ekugcineni iqhawe.
Lokho kuhle kakhulu ngokwenzekile nge- I-Australian Retriever , eyaziwa nangamagama ahlukene, kufaka phakathi I-Golden Aussie , I-Australian Retriever , Umalusi wase-Australia ongu-Retriever , futhi IGolden Australian Shepherd .
Hlangana nenhlanganisela yeGolden Retriever & Australian Shepherd
Le ngubo enoboya ingungqondongqondo enamandla ezokugcina ezinzwaneni zakho ngazo zonke izindlela ezihamba phambili. Qhubeka ufunde ukuze uthole okuningi!
Umsuka we-Australian Retriever
Ibukeka kanjani i-Golden Aussie?
Yini ongayilindela kusimo se-Aussie Retriever?
Ukuba nomalusi waseGolden Australian
Ngabe abelusi baseGolden Australia banezinkinga zezempilo?
Ukuthola umdlwane wase-Australia Umalusi othengiswayo
Ingabe i-Australian Retriever engaphambi kwesikhathi ingulwanyane yakho ephelele?
Kukholakala ukuthi umfuyi wase-Australia unesibopho sokwakha le doggo ehlanganisiwe. Ngokusho kombono, umfuyi weqa umalusi wakhe omnyama wase-Australia neGold Retrievers yakhe ngo-2007 nango-2008.
Kusukela lapho, i-crossbreed ibonwa yilezi zinhlangano: I-American Canine Hybrid Club (ACHC), I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC), Inja Registry yaseMelika (DRA), kanye I-International Designer Canine Registry (IDCR).
Manje, ake siqhubekele ezinjeni ezaqala lolu hlobo oluhlanganisiwe oluhle.
Abelusi Base-Australia: I-powerhouse pooch
Hlangana noMalusi wase-Australia
Ngaphandle kwendawo esegameni labo, yesimanje Abelusi Base-Australia ayivelanga eLand Down Down.
Okhokho babo bakamuva bavela ezweni laseBasque eYurophu, kepha lolu hlobo lwacwengisiswa futhi lwenziwa lwathandwa e-US.
Ukufuywa ekwaluseni imfuyo, Ama-aussies kukhona izinja ezisebenza kuze kufike emgodini .
Yaziwa ngeyabo isimilo sokusebenza futhi ubuhlakani , i-Australian Shepherd iyi-shoo-in yazo zonke izinhlobo zemisebenzi ye-canine, kusuka ekuseshweni nasekutakuleni kuya ekwelashweni.
IGolden Retrievers, olunye lwezinhlobo ezithandwa kakhulu eMelika
Hlangana neGolden Retriever
Idizayinelwe ukuthola izinyoni zasemanzini, Ukubuyisa Okusagolide (noma Goldens ngamafuphi) kungenye inhlobo ezinikele.
Singabonga uDudley Marjoribanks waseScotland ngokusinika iGolden Retriever maphakathi nawo-1800.
Emgqonyeni kadoti wababuyisi abamnyama, kwagqama umdlwane owodwa ophuzi. IMarjoribanks yeqe umdlwane nalokhu okungasekho I-Tweed Water Spaniel . Inzalo yabo yanikela kwiGolden Retriever yanamuhla.
Eminyakeni edlule, i-Golden Retrievers yaba izilwane ezifuywayo zomndeni . Zibalwa ngokungaguquguquki ku- phezulu 5 kwe-AKC 'Izinhlobo Ezidume Kakhulu' uhlu .
Enye yezinto ebanda kunazo zonke ngesiphambano se-Australian Shepherd-Golden Retriever ukuthi azikho izinja ezimbili ezibukeka zifana. Ungathenga imidlwane kudoti ofanayo, futhi ngayinye ingagcina ngokubonakala okuhlukile.
Ama-Aussie Retrievers athanda ukuba nawo ezemidlalo, ozimele abalinganiswe kahle eziboleka umsebenzi nokuzivocavoca umzimba.
Ngamehlo afudumele angaba yimithunzi ye okuluhlaza okwesibhakabhaka noma onsundu , ukuhlanganiswa kwakho kwe-Australian Retriever nakanjani kuzoba yi-stunner. Izindlebe zazo zigxamalazile ngapha nangapha kwekhanda lazo elibanzi, kanti amakhala aso ayindilinga, amnyama yi-cherry yesaga ngaphezulu.
Ingubo ephindwe kabili ye-Aussie Retrievers water-repellant ingaba yinhlanganisela ye- mhlophe, mnyama, nsundu, brindle, blonde, noma igolide imibala. Bangaba nesici merle ebomvu noma eluhlaza okwesibhakabhaka kaMalusi wase-Australia.
Uboya babo bungaba buphakathi noma bube bude, buthuntshise kancane noma buqonde ngqo, kepha imvamisa bunokuthungwa okukhohlakali.
UMalusi wakho waseGolden wase-Australia cishe uzogcina nge umsila omude, othambile weGolden Retriever. Lokhu akuhlali kunjalo, noma kunjalo.
Amanye ama-Aussies angenacala azalwa enemisila eboshiwe. Ngokuya ngabazali be-pup yakho, bangaba nomsila ogcwele, noma ungaba mfushane kakhulu kubonakale sengathi abanaye nhlobo.
Inkulu kangakanani i-Australian Retriever ekhule ngokugcwele?
Ngokususelwa kumashadi okukhula komzali wabo, i-Aussie Golden yakho kufanele ifinyelele usayizi wabo ogcwele phakathi Izinyanga eziyi-12 kuya kwezingu-16 ubudala . Abantu abadala ngokuvamile bazokala phakathi Amakhilogremu angama-30 kuye kwangama-60 (14 to 27 kg) bese uyama Amasentimitha angu-19 kuya kwangu-23 (48 kuya ku-58 cm) ubude.
Uncamela okuthile eduze nosayizi wamathanga? I-Mini Golden Aussie kungenzeka uma oyedwa noma bobabili abazali bequkethe i- Umalusi waseMelika omncane futhi I-Mini Retriever Encane .
Noma kungekho ukwehluka kwe-Australian Retriever okukhulu kakhulu, lolu hlobo lukhulu hhayi eyenzelwe ukuhlala efulethini . Ngomoya wabo wokuzithokozisa, lawa ma-canine akhula kahle emakhaya anamagceke amakhulu, abiyelwe.
Le fido iyi- isilwane esihle semindeni esebenzayo . Bazwana nezingane zabo bonke ubudala, futhi bakhe ubuhlobo obuseduze nawo wonke umuntu osephaketheni labo.
Thatha umzuzwana ukubukela le vidiyo yomdlwane ophuphuzela ukujabulela isikhathi sokudlala ngemuva nabantu babo:
Eqinisweni, ama-Retrievers ase-Australia ayithanda kakhulu imindeni yabo kangangoba angathanda ukuba nabo 24/7.
Bangakubekezelela ukuba bodwa isikhathi esifushane, kepha badinga ukuxhumana njalo nokukhuthaza . Ngaphandle kwalokhu, abelusi baseGolden Australia bangaphendukela ekuziphatheni okulimazayo ukuze babhekane nokungazinzi nokukhathazeka ngokwehlukana. Ngenxa yalokho, le ngxube akufanele aphile noma alale ngaphandle .
Ukuze wenze ubumnandi ebhodweni, ama-Golden Aussies ama-doggos anobungane , ngisho nabantu ongabazi. Uma ukujabulela ukusingatha nokujabulisa, ngeke kudingeke ukhathazeke ngomxube wakho we-Australian Shepherd-Golden Retriever ozama ukwethusa izivakashi zakho.
Njengoba benobungani, i-Aussie Shepherd Retrievers ingaba nefayela le- uchungechunge lwendawo . Bangathola ukuvikelwa ngumuntu abamthandayo, noma bangabhebhisa izinto abazithandayo endlini.
Bheka izingane nezinye izilwane ezifuywayo uma amathoyizi ehilelekile ngesikhathi sokudlala. I-Golden Aussie yakho inganquma ukuthi bakhathele ukwabelana, futhi uzofuna ukuba seduze ukuze uqiniseke ukuthi wonke umuntu udlala kahle.
I-Aussie Retrievers unezimfanelo zokubuka , futhi. Yize bengakhonkothi kakhulu ngokujwayelekile, bazimisele kakhulu ukukuvikela ezinsongweni ezingaba khona noma uma kukhona okuthile okungahambi kahle.
Uhlangothi lwabo lwe-Aussie luyabenza abelusi abanekhono , ngakho-ke ojahidada namakati mabaqaphele! Ngokuya ngokuthi iqine kangakanani le mizimba yezakhi zofuzo, ungathola amalungu akho amancane kakhulu ephekiwe ngezikhathi ezithile.
Ukungakhathazeki ngoba le mikhuba yokwalusa izoncipha kancane kancane njengoba inja yakho ikhula. Ungathatha futhi izinyathelo zokufundisa i-pup yakho nezingane zakho ukuthi benzeni uma lokhu kuziphatha kukhula.
Into eyodwa engasoze yaguga i-Aussie Golden's yakho umoya we-rambunctious . Bona uthando ukudlala, ukulanda, nokuphila impilo ngokushiya. Umdlwane wakho angakhula abe mude, kodwa bazoba njalo ungalokothi udlule injabulo yabo efana nomdlwane .
Hlangana noLoki, ingxube yeGolden Retriever-Australia Shepherd - Umthombo wesithombe
Ngenhlanhla, ukuqeqesha lolu hlobo kungukuhamba epaki yezinja.
I-Aussies neGoldens yizinhlobo ezimbili ezihlakaniphe kakhulu emhlabeni we-canine, ngakho-ke i-Australian Retriever yakho iqinisekiswe kakhulu ukuba umfundi osheshayo . Bayakuthanda ukuqeqeshwa, futhi lokhu kuzokuvumela ukuthi uqede izindlela zokuziphatha eziyinkinga kusukela ekuqaleni.
Ngokushesha nje lapho umfundi wakho eza ekhaya nawe , qala ukubeka okulindelwe. Ufuna ukuvimbela ukwalusa okungafanele noma izici zomhlaba ngaphambi kokuthi kuqale.
Lapho nje ingxube yakho yase-Australia Shepherd-Golden Retriever igonywe ngokuphelele, qala ukubayisa emakilasini okulalela kanye nasemidlalweni yama-puppy.
Ukuhlanganisa ukuxhumana nabantu kanye nokuqeqeshwa kokuziphatha kuyo yonke impilo yabo kuzobafundisa ukuthi benze kanjani sebenzisana ngokufanele nezinye izinja nabantu . Kubenza futhi bangabi namandla kakhulu yabo umuntu oyintandokazi. Futhi, kuzosiza qinisa indawo yakho njengomholi wepakethe ongesabi .
Azisoze zaba mdala kakhulu ukuthola amaqhinga amasha. Futhi, ukuvuselelwa kwengqondo okuqhubekayo kubalulekile kule njabulo yesiphambano. Sebenzisa ukuqeqeshwa njengesikhathi sokubopha inja yakho futhi unakekele izidingo zayo.
Ngokujabulisayo, ukunakekelwa komxube we-Australia Shepherd-Golden Retriever kuqondile, futhi. Qhubeka ufunda ukuze ubone ukuthi yini okudingeka uyenze ukugcina i-pooch yakho ijabule futhi iphilile!
Ukuzilungisa: Ngabe ababuyisa ama-Australia bayachitha?
Yebo. Futhi njengoba ukulinganisela kuya kuma-shedders asindayo , ukuxubha kabili ngesonto ngokuvamile kwanele. Ungahlala uwaxubha kaningi ukuze unciphise ukuchitheka. Kepha AKUFANELE uphuce le nja.
Uyakhumbula ukuthi lelojazi eliphindwe kabili esishilo ekuqaleni, akunjalo? Lolu ungqimba lwesibili lwezinwele luvikela inja yakho yeGolden Aussie ezintweni futhi lumsize alawule ukushisa komzimba wakhe.
Ukushefa kunciphisa ikhono lejazi lokwenza umsebenzi walo futhi kungadala ukungaphatheki kahle nokulimaza inja yakho.
Inja yase-Australia yase-Australia enempilo - Umthombo wesithombe
Ukugcina leyo ngubo ephindwe kabili isesimweni esiphezulu kuzoqinisekisa ukuthi iGolden Aussie yakho izokwenza kanjalo kuyaqabukela kudinga ukugeza .
Siyazi ukuthi kuzwakala kungqubuzana nezinto, kodwa wonge izindawo zokugeza ezigcwele uma kunesidingo. Leyo yindlela engcono kakhulu yokugcina amafutha emvelo eboyeni bawo.
Uma usuvele ucike umcabango wezinwele zezinja ezingcolile, ungakhathazeki. Lapho i-pup yakho ingenisa ngaphandle, sebenzisa i- ibhulashi noma ukusula okumanzi ukuzihlanza. Uma zingcole ngendlela emangalisayo nezimo zezulu, zikhiphe ngaphandle. Vele ungasebenzisi i-shampoo!
Okunye kwe- inqubo yobuhle yase-Australia yeGolden Retriever ayisitholi isikhathi esiningi . Kanye ngosuku noma ngaphezulu, uzofuna ukuhlola lezo zinto ezingathandeki izindlebe ngezimpawu zezinambuzane noma imfucumfucu.
Ungakhohlwa ukuxubha amazinyo akhe nsuku zonke futhi nquma izinzipho zakhe njalo ngesonto.
Yikuphi ukudla kwezinja okuhle kakhulu kwe-Aussie Retriever?
Ukudla okwanele kuyahlukahluka kuye ngezinja. Ama-canine asebenzayo ngokuvamile enza kahle ngokudla enamaprotheni amaningi , futhi lokhu kuhlukana akuhlukile. Khetha i- ikhwalithi ephezulu eyomile yakhelwe ama-fidos amaphakathi naphakathi amakhulu anamandla. Kufanele futhi ilungele ubudala besilwane sakho, isisindo, nezidingo zezempilo.
Cishe izinkomishi ezi-2 ukuya kwezi-3 zokudla nsuku zonke izogcina i-pooch yakho ibaselwe, bese ihlukaniswa ngesidlo sasekuseni nangesidlo sakusihlwa. Gwema ukondla ngokweqile nokondla mahhala ukunciphisa ubungozi bokuqunjelwa kanye nokuzuza kwesisindo okungenampilo.
Usebenzisa i-Golden Aussie yakho
Abashisekeli bokuqina, lokhu kungaba yinja yakho nje. Abelusi baseGolden Aussie yibo unamandla kakhulu nesidingo okungenani imizuzu engama-60 yokuzivocavoca umzimba ngosuku .
Kumele kucace ukuthi leli nani lokuzivocavoca liyi okungeke kuxoxiswane ngakho .
Awuqinisekile ukuthi ulilungele ihora elingaphazanyiswa le-cardio nsuku zonke? Umbono oyiphutha ovamile ngukuthi lo msebenzi udinga ukwenzeka ngasikhathi sinye. Kuyinto kungcono ukusakazeka ukuqeqeshwa kwe-doggo yakho usuku lonke. Sithembe, amalunga nemisipha kaFido kuzokubonga ngakho.
Ngayo leyo migqa, uhlobo lokuzivocavoca lwe-pup yakho kufanele lubandakanye okungaphezu kokuhamba noma ukugijima epaki.
Ukuvivinya umzimba kuyesabeka, kepha ama-Australian Retrievers ayaqhakaza lapho nezidingo zabo zengqondo zihlangatshezwa. Ukuze ugcine ubuchopho babo bujabule, hlanganisa ukuhamba okulingene nobude bokudlala nezikhathi zokuziqeqesha.
Zizwe ukhululekile ukunonga izinto phezulu . Banjalo ungazweli esimweni sezulu esishisayo noma esishisayo , noma. Kusho ukuthini lokho kuwe? Kuningi ongakhetha kukho!
Bathanda ukugijima ngokukhululeka ezindaweni ezivulekile, bejaha amagagasi olwandle, ngisho nokuhamba izintaba! Ayikho intaba ende kakhulu, uma ubuza lawa ma-canine.
Izikhathi zokuzivocavoca umzimba akudingeki ukuthi njalo zibandakanye uhambo lwensimu, noma kunjalo. Thepha ohlangothini lwakho lwe-Golden Aussie Shepherd's retriever, bese uyakhathala ngomdlalo wakudala wokulanda. Vele uqiniseke ukuthi uku- indawo ebiyelwe ngokuphelele ngaphambi kokubayekela badlale nge-leash.
Lapho i-Australian Retriever isibamba iphunga, iyaboshwa futhi izimisele ukuyilandela. Zijwayeze ukukhumbula amakhono abo njalo, bese ubheka ukuthola i- ukuhola okude ngakho-ke bakwazi ukwelula imilenze yabo ngaphandle kokuthatha uhambo lwasensimini lwabo.
Njengazo zonke izinhlobo, i-Aussie Golden Retrievers isengozini yezimo ezithile zempilo.
Kuyingxenye yobunikazi bezinja okungekho noyedwa kithi othanda ukucabanga ngayo. Kodwa lapho wazi kakhulu ngezici eziyingozi zenja yakho, kuzoba lula kakhulu ukubona izinkinga ezingaba khona zezempilo.
Ngama-Golden Aussies, ufuna ukubheka izimpawu ze- izinkinga zamehlo , njenge ngamehlo futhi colobomas . Kukhona futhi i-thyroid engasebenzi kahle, i-allergies, i-bloat, futhi i-hip dysplasia .
I-Retriever yakho yase-Australia nayo ingathola ifa lezinkinga eziqondene nokuzala. IGolden Retrievers idume kabi ngokuhlaselwa umdlavuza, kanti Ukuzwela Ngezidakamizwa Eziningi kuvamile ku-Australian Shepherds.
Ngenhlanhla, noma ngabe kunezingozi ezithile zempilo, u-Aussie Goldens uphila isikhathi eside. Ngokuvakashelwa udokotela wezilwane njalo nokunakekelwa okufanele, ama-Retrievers ase-Australia ajabulela isikhathi sempilo se- Iminyaka engu-12 kuya kwengu-15 .
I-Australian Shepherd Retriever puppy - Umthombo wesithombe
Ama-Retrievers ase-Australia ayabiza uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zomklami. Amanani alezi zinja asukela ku- $ 300 kuya ku- $ 900 .
Ngoba le hybrid iseyintsha futhi ayivamile, ukuthola umfuyi noma ikennel elizala kuphela izingxube ze-Australian Shepherd-Golden Retriever kungaba nzima.
Lokho akusho ukuthi akunakwenzeka, noma kunjalo.
Abazalisi nama-kennels ase-Australia eGolden Retriever
Uma usuvele wenze ucwaningo lwakho futhi unesiqiniseko sokuthi ungabhekana nalokhu kuxubana, sithole amanye amawebhusayithi ane-Golden Aussies athengiswayo noma atholakele.
Zingaba nezinye iziphambano ze-Australia Shepherd nezinhlanganisela zeGolden Retriever ezingakuthakazelisa. Nazi izindawo ezimbalwa ongazihlola:
Abelusi base-Australia Furever (IRancho Cucamonga, CA)
Ukusindiswa Komalusi waseNtshonalanga Australia (USheridan, WY)
Ukutakula kwe-Neuse River Golden Retriever (URaleigh, NC)
Sithole ne- Ikhasi le-Facebook ezinikezelwe kuma-Retrievers ase-Australia, futhi sicabanga ukuthi kufanelekile ukubheka.
Hlangana noDaisy, umdlwane we-Aussie Golden mix - Umthombo wesithombe
Noma ngabe ushayekile noma cha ngalolu hlobo, kufanele uvume ukuthi i-Aussie Goldens inokunikela okuningi.
Bona bathande imindeni yabo , bayathanda ukudlala, futhi bayathanda ukufunda. Bakujabulela kakhulu ukuzivocavoca umzimba futhi kudinga abanikazi abasebenzayo ngamandla amaningi.
Ngabe ucabanga ukuthi ungahambisana ne-Australian Retriever? Sazise kumazwana abekiwe!
IPomapoo - Umhlahlandlela Wokugcina kuMxube Wokudlala Pomeranian Poodle
Ingabe kukhona iGoldendoodle Encane? Yebo ikhona!
UDorgi: Ufuna ukufana neNdlovukazi? Thola ukuhlanganiswa kweCorgi-Dachshund!
Yini iHavapoo? - I-Havanese Miniature Poodle Mix
yini i-miniendendle encane
i-chihuahua ne-jack terrier mix
amagama amahle kakhulu enkunzi